'' မိခင်တွေ အဖွားတွေရဲ့ တန်ဖိုး '' | Radio Veritas Asia
မိခင်တွေ အဖွားတွေရဲ့ တန်ဖိုးကို ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်သူတိုင်းတာရေတွက်ပြနိုင်သလဲ?
မာတာမိခင် တုနှိုင်းမမီဆိုသလို မိခင်တွေရဲ့ တန်ဖိုးဟာ တုနှိုင်းလို့လဲ မမှီပါဘူး။
မိခင်ဘဝဆိုတာက ပဋိသန္ဓေတည်တဲ့ အချိန်ကနေ စခဲ့တာပါ။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပေါ်လွင်ထင်ရှားတဲ့ အချက်တစ်ခု ရှိပါတယ်။ အဲဒါက ဘယ်ယဉ်ကျေးမှု ဘယ်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကမဆို မွေးဖွားလာတဲ့ သားသမီးကို ဒီမိခင်က ဘယ်လိုပုံဖော်ပေးတယ် ဆိုတဲ့ အခန်းကဏ္ဍပါပဲ။ မိမိသားသမီးကို မိခင်တွေက ပုံ Shape ဖော်လိုက်တဲ့အခါမှာ အနာဂတ် ကမ္ဘာကြီးကို ပုံဖော်ရာ ရောက်သွားစေပါတယ်။ သမိုင်းကို ပုံဖော်ရာ ရောက်သွားပါတယ်။ အမှန် တကယ် မိခင်တွေဟာ ဖခင်တွေနဲ့ တစ်ပါတည်း ဆက်နွယ်နေတာပါ။ သားသမီးတွေကို စွန့်စားလို စိတ်ရှိဖို့ မိမိဘဝ ဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ မိမိဘဝကို ဘယ်လိုပုံဖော်ရမယ်ဆိုတဲ့ သင်ပေး လိုက်တာက မိခင်တွေက သမိုင်းကို ပုံဖော်ပေးတဲ့ ကူညီပေးတဲ့သူတွေအဖြစ် တွက်ဆလို့ရပါတယ်။
မိခင်တွေဟာ ငါ့သားသမီးကို ပြီးပြည့်စုံအောင် ငါစောင့်ရှောက်နိုင်တယ်လို့ ဘယ်တော့မှ မိမိကိုယ်မိမိ မထင်ပါဘူး။ အမြဲပဲ စွန့်စားလိုစိတ်တွေနဲ့ ငါဟာ သားသမီးကို ထိန်းကျောင်းခဲ့တာ perfect job ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ ဘယ်တော့မှ မထင်ခဲ့သူတွေပါ။
ကျွန်မတို့ သမိုင်းကို ပြန်ကြည့်ရင် အမေရိကန်သမ္မတ Mr Bush, သူ့သား Groge Bush တို့လို စင်ကာပူက ခေါင်းဆောင် လီကွမ်ယု အခုသူ့သား စင်ကာပူကို ခေါင်းဆောင်နေကြတာ။ ဒါတွေဟာ မိခင်တွေက ဘယ်လို mould ထုဆစ် shape ပုံဖော်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ပေါ်လွင်ပါတယ်။ တခြားအရပ် ဘက် အဖွဲ့အစည်းတွေ ကုမဏီတို့၊ စစ်တပ်တို့မှာလည်း ခေါင်းဆောင်နိုင်တဲ့သူတွေ ဖြစ်သွားကြတာ ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ သားသမီးကို မိခင်က ပြည့်ဝတဲ့ ချစ်ခြင်းတွေရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ခဏလေးဖြစ်ဖို့ မွေးစ က စလို့ နှစ်ပေါင်းများစွာ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားကြီးစွာနဲ့ စွမ်းရည်တွေသုံးပြီး ပုံဖော်ခဲ့လို့ အခုလို ရလဒ် ကောင်းရခဲ့တာပါ။
ဒီမိခင်တွေဟာ ကိုယ့်သားသမီး တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်လုပ်ဖို့၊ ကုမဏီမှာ အကြီးအကဲဖြစ်ဖို့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေ ဖြစ်ဖို့ ရည်ရွယ်ပြီး ပြုစုပျိုးထောင် ပုံသွင်းခဲ့ကြတာ မဟုတ်ပေမယ့် ဒီသားသမီးက ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါ သူတို့ ရွေးချယ်တဲ့ဘဝ life and relationship မှာ influences သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့သူတွေ ဖြစ်လာကြတာပါ။
မိခင်တွေဟာ ဥပမာ ဘောလုံးနည်းပြလိုပဲ။ သားသမီးအတွက် ကိုယ်ပိုင်နည်းပြတွေဖြစ်ကြ တယ်။ မိမိသားသမီးကို ကြိုက်သလို ပုံဖော်လို့ရတဲ့သူတွေပါ။ အံ့မခန်းပါပဲနော်။ amazing ပဲ။
မိခင်တွေဟာ သူတို့မှာ ဒီလို power တွေ ရှိတယ်ဆိုတာ မထင်ပါဘူး။ မိခင်ဟာ အတန်း ပညာတတ်သည်ဖြစ်စေ၊ မတတ်သည်ဖြစ်စေ မဆိုင်ပါဘူး။ ဉာဏ်ရှိတဲ့ အသိပညာပဲ လိုတာပါ။ အဲဒီ တော့ မိမိသားသမီးကို လူထုပတ်ဝန်းကျင် society မှာ တန်ဖိုးရှိတဲ့သူ တန်ဖိုးနိမ့်တဲ့သူ မိမိလိုသလို ပုံသွင်းထုဆစ်လို့ရပါတယ်။
စကားပုံရှိပါတယ်။ The hand that rocks the cradle is the hand that rules the world.
မြန်မာလိုကတော့ ပုခက်လွှဲတဲ့လက်က ကမ္ဘာကို အုပ်စိုးနိုင်တယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ မိခင်တွေ အဖွားတွေဆိုတာ အင်မတန်မှ အဖိုးတန်တဲ့ သြဇာအရှိန်အဝါရှိတဲ့သူ တွေဆိုရင် မမှားပါဘူး။
ဒါကြောင့် မိခင်တွေကို စိတ်ခွန်အား ပေးချင်ပါတယ်။ မိခင်ဘဝဆိုတာ သားသမီးအတွက် ဘဝတစ်ခုလုံး မြှုပ်နှံထားတဲ့ သူတွေပါ။ မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိပါ။ မိခင်တစ်ယောက်ဆို တာ ကမ္ဘာကြီးကို ပုံဖော်ပေးနိုင်တဲ့သူ၊ ကမ္ဘာကြီးကို ပြောင်းလဲအောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေပါ။ မိမိက ဒီလိုမထင်ပေမယ့် ကမ္ဘာကြီးမှာက ဖြစ်နေတာပါ။ ဒါဟာ မိခင်တစ်ယောက်၊ အဖွား တစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးပါပဲဆိုတာကို message ပေးရင်း ရပ်နားခွင့်ပြုပါ။